वीरगन्जमा बरामद साढे २२ किलो सुनमा भाजपाका नेता सिन्हाका भाइको संलग्नता ! « MNTVONLINE.COM
वीरगन्जमा बरामद साढे २२ किलो सुनमा भाजपाका नेता सिन्हाका भाइको संलग्नता !
काठमाडौँ । वीरगन्जमा बरामद साढे २२ किलो सुनमा भारतीय जनाता पार्टी (भाजपा)का नेताका भाईको संलग्नता रहेको बताइएको छ । बिहार विधानसभा सदस्य उम्मेदवार बनेका प्रमोद सिन्हाका भाई अशोक सिन्हाको संलग्नता रहेको भारतीय सञ्चारमाध्यामले बताएका छन् ।
प्रहरीले १ केजीका १३ वटा बिस्कुट, मझौला बिस्कुट ४६ थान र सानो बिस्कुट १०० ग्रामका १० थान बरामद गरेको छ । प्रहरीले सुनका गरगहना र चाँदीका भाँडासमेत बरामद गरेको छ । पर्सा प्रहरीले भारत पूर्वी चम्मपारण हरैया बस्ने अशोक सिन्हाको बस्ने फ्ल्याटबाट सुन बरामद भएको जनाएको थियो ।
नेपाल प्रहरीले अशोक सिन्हाबारे विस्तृत जानकारी भनेका दिएको छैन । तर भारतीय सञ्चार माध्यमहरुले अशोक सिन्हा रक्सौलका भाजपा उम्मेदवार प्रमोद सिन्हाका भाई रहेको उल्लेख गरेका छन् ।
कुटपिट गरी भरतको हत्या गरेको आरोपमा तीन जना पक्राउ
मुस्लिमहरुलाई फ्रेन्च मार्ने अधिकार छ भन्ने महाथीर मोहम्मदको भनाई विवादमा !
सिमाना खुल्ला गर्ने विषयमा वेष्टर्न अष्ट्रेलिया आन्तरिक छलफलमा
एकैदिन ३ हजारभन्दा धेरै कोरोना संक्रमणमुक्त, सक्रिय संक्रमितको संख्या ३९ हजार